Daawo: Koox mucaarad ah oo qabsatay markab militari oo ay leeyihiin Imaaraadka | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Daawo: Koox mucaarad ah oo qabsatay markab militari oo ay leeyihiin Imaaraadka
Daawo: Koox mucaarad ah oo qabsatay markab militari oo ay leeyihiin Imaaraadka
Sanca (Dalkaan.com) – Kooxda Xuuityiinta ee dalka Yemen ayaa shaaca ka qaaday inay qabsadeen markab militari oo ay leeyihiin Imaaraadka Carabta, kaasi oo Isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ay sheegeen inuu siday sahay caafimaad.
Xuutiyiinta ayaa sii daayey sawirro ay sheegeen inay muujinayaan markabka iyo agab saaran oo ay ka mid yihiin baabuur militari iyo hub tiro badan.
Markaba, oo lagu magacaabo Rwabee, ayaa sida ay sheegeen lagu Badda Cas ee Yemen.
Isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa tallaabadan ku qeexay burcad badeednimo, waxayna ku hanjabeen inay xoog dib ugu soo qabsan doonaan.
“Markaba Rwabee wuxuu kasoo laabtay Jasiiradda Soqadra, oo uu u tegay howlgal lagu dhisayo isbitaal, wuxuuna ku socday magaalada Jizan ee Sacuudi Carabiya,” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxaya Xulufada.
“Maleeshiyada waa inay deg deg usii daayaan markabka, ama Xulufada waxay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, si ay ula tacaalaan xadgudubkan, oo ay ku jirto adeegsiga awood,” waxaa sidaas yiri afhayeenka xulufada, Turki al-Malki.
Hase yeeshee, Xuutiyiinta ayaa ka digay inuu jiri doono cawaaqib xooggaan, haddii la beegsado markabka.
Dhacdadan ayaa timid ayada oo toddobaadyadii tegay uu aad u xoogeystay dagaalka Yemen, halkaas oo Sacuudiga ay si xooggan u duqeynayaan dhulka ay haystaan Xuutiyiinta, halka mucaaradkan ku xiran Iran ay ayagana sare u qaadeen weerarada loo adeegsado diyaaradaha Drone-ka ee ay ka fulinayaan boqortooyada.
Imaaraadka Carabya ayaan weli ka hadal markabka laga qabsaday.
Sarkaal Mareykan ah oo ku sugan gobolka ayaa sheegay in markabkan uu yahay kii ugu horreeyey ee ay qabsadaan Xuutiyiinta tan iyo daba-yaaqadii 2019.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola oo Bernardo Silva qiray inuu yahay...
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday inuu u arko Bernardo Silva “ciyaaryahanka ugu fiican kooxda”. Guardiola ayaa hadlay ka dib markii uu Portuguese-ka ku soo...
Xogtii Ugu Dambeysay Qaraxii Ka dhacay Muqdisho, Rooble oo Ka Bad-baaday...
Xildhibaan aad ugu dhow FAHAD oo maanta waayey kursigi uu ku...
Deg deg Taliye Xijaar oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada,...
Ciidamo ka tirsan kuwa KENYA oo qarax lagu laayey
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Moussa Diaby, Haaland, Paul Pogba, Miedema,...